Waan Soo Dhawaynaa Caruuta! | The Seattle Public Library
Soomaali : Waan Soo Dhawaynaa Caruuta!
Sideen U Bilaabaa?
Waan Soo Dhawaynaa Caruuta!
Ma u Rabtaa Gargaar
Orshaha Istraatiijiyada Maktabadda Dadweynaha Seattle 2011-2015
(We welcome children!)
Ma rabtaa inaad ka gargaarto caruurtaada barashada akhriska iyo inay ku fiicnaadaan iskoolaadka? Waan ku soo dhawaynaa caruurta dhamaan goobaha maktabada. Booqo qabta caruurta ee laanta xaafadiina oo raadi buugaagta, DVD-yada iyo muusiga Soomaaliga iyo Ingiriiska ee da’ kasta. Caruurtaadu waxa laga yaabaa inay helaan kaararkooda Maktabada. Waxa kale oo aanu haynaa barnaamijyada caruurta oo afaf badan ah. Ku soo biiri ilmahaaga wakhtiga sheekada ama a “Play and Learn Group” (Kooxda Ciyaar oo Baro).
Waa fiican tahay inaad tahay dhalinyaro maktabadeena! Badi goobyada Maktabadeeena, waxaan qabnaa jiid u gaar ah dhalinyarada, oo ay yaalaan buugaagta iyo jaraa’idka dhalinyarada iyo meelo ay ardaydu ku kulmaan. Kaalay Tartanka Gabayada iyo habeenada ciyaaraha! Ku biir kooxda buugaagta dhalinyarada, ururka jeska, ama qaado kulan-hawleed oo ah sida loo abuuro midhaha heesaha ama loo sameeyo buugaaga majaajilada. Waxa kale oo aan bixinaa casharo aan ku gargaarayno dhalinyarada barashada qoriinka, isu-diyaarinta imtixaanada gelitaanka kuliayada, iyo helitaanka lacagta kuliyada.
Miyuu ilmahaagu ama dhalinyaradaadu u baahan yahay taageero xagga dugsiga? Maktabadu waxay qabtaa “Homework Help” (Gargaarka Shaqada-guriga) ee gobo badan. "Homework Help" tabaruc ka gargaara caruurta iyo dhalinyarada maadooyinka kala duwan ee ku adag sida – taariikhda, Ingiriisida, qoriinka, sayniska, xisaabta. Waxay gaar ahaan ku fiican yihiin gargaarka dadka ku cusub ku hadalka Ingiriisida. “Homework Help” waxa kale oo af Ingiriisi ahaan laga helaa internetka www.spl.org.
Ixtiraanka Xaga Caruurta
(Unattended children's policy)